Tao Kae Noi လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းဒီ Tao Kae Noi ရေညှိလေးကို တော်တော်များများ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်… လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ထင်တယ်… သူဠေးလေးရေညှိဆိုပြီး နာမည်ကြီးလာတာ… ရေညှိထုပ်လေးက အရသာမျိုးစုံပဲ… ကိုက်လိုက်ရင် ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေး… စားသာစားပြီး တစ်ခါမှ ရေညှိထုပ်အိတ်လေးပေါ်က အကျီ ၤ အနီဝတ်ထားတဲ့ အရုပ်လေးအကြောင်း တစ်ခါမှ စိတ်ဝင်တစားမရှိခဲ့ဘူး…...
Visits : 3142
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အရောင်းပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့၊ တိုး တက် ဖို့ ငွေလိုပါတယ်။ အဲဒီငွေကိုရနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောလမ်း ကြောင်း ဟာ အရောင်း ပါပဲ။ ရောင်းနိုင်မှ ပိုက်ဆံရမယ်။ ပိုက်ဆံရမှ ချမ်းသာမယ်။ ချမ်းသာ မှ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် လိုအပ် သမျှ အသုံးအဆောင်တွေ ဝယ်နိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်းရပါမယ်။ ဒီနေ့နိုင်ငံတကာ အစိုးရ အသီးသီးရဲ...
Visits : 2620
NASA's New Horizons spacecraft flew past Ultima Thule in the early hours of New Year's Day, ushering in the era of exploration from the enigmatic Kuiper Belt,aregion of primordial objects that holds keys to understanding the origins of the solar system."Congratulations to NASA's New Horizons team, Johns Hopkins Applied Physics Laboratory and the...
Visits : 2426
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေ လုံးဝမလုပ်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူတွေ၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေ လုံးဝမလုပ်တဲ့အချက်တွေကတော့၁။ ဆင်ခြေမပေးကြဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသူတွေဟာ အရာရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ မီးပွိုင့် မိလို့ အလုပ်နောက်ကျတာ၊ သူဌေးမကောင်းလို့ ရာထူးမတိုးတာ စသဖြင့် သူတို့ကဘယ်တော့မှဆင်ခြေပေးလေ့မရှိဘူး။ သူတို့ဘဝကို သူတို့ကိုယ်တိုင...
Visits : 2522
Visits : 2410
Visits : 2376
97 - 102 of ( 138 ) records